Sitemap-Shenzhen Light On Technology Co. , Ltd
ABOUT US | ထောက်ခံစာ | ဗီဒီယို | FAQ | FACILITY
600 Watt LED သည် Spectrum အပြည့်ဖြင့်အလင်းကြီးထွားစေသည် | Full Spectrum 600W LED သည်ဖန်လုံအိမ်အတွက်အလင်းကိုကြီးထွားစေသည် | DIY ဖန်လုံအိမ်အတွက် 800W Spyder LED သည်အလင်းကိုကြီးထွားစေသည် | အကောင်းဆုံး LED သည် Veg နှင့် Flower အတွက်အလင်းကြီးထွားစေသည် | PPFD မြင့်မားသော 800 Watt LED သည် Cannabis အတွက်အလင်းကြီးထွားစေသည် | Highest Yield 1000 Watt LED Grow Light
ခေါက်သိမ်းနိုင်သောအကောင်းဆုံး LED သည်ဆေးခြောက်နှင့် Hemp အတွက်အလင်းကြီးထွားစေသည် | Full Spectrum LED Grow Light For Full-Cycle Growth | Hydroponic Led Grow Light With Samsung And Orsam LED | 600 Watt LED ဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလင်းကြီးထွား
80W DIY LED grow light | 100W DIY LED အလင်းကြီးထွား
400 Watt Quantum Board သည် LED ကိုကြီးထွားစေသည် | 300 Watt Quantum Board သည် LED ကိုကြီးထွားစေသည် | 200 Watt Quantum Board သည် LED ကြီးထွားလာသည် | 100 Watt Quantum Board သည် LED ကြီးထွားလာသည် | အကောင်းဆုံးအိမ် LED စိုက်ပျိုးသူများအတွက် LED ကြီးထွားမှုအကောင်းဆုံး
300W LED Grow Light For Indoor Plants | 200W LED သည်အိမ်တွင်းအပင်များအတွက်အလင်းကြီးထွားစေသည် | 100W LED Grow Light for Indoor Plants
20W 546 Leds/M 24V 10mm White COB LED Strip Light | 8W 528 Leds / M 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light | 10W 512 Leds / M 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light | 6W 384 Leds / M 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light | 10W 378 Leds / M 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light | 10W 210 Leds/M 24V 8mm White COB LED Strip Light
RGB LED Strip Light COB 210 LEDs / m | RGB LED Strip Light COB 378*3 LEDs/m
COB Neon Flex LED Strip Light 7*10mm 10W/Meter 378 LEDs/m | COB Neon Flex LED Strip Light 5*10mm 10W/Meter 378 LEDs/m
A Good News From A Indoor Farm of Cannabis Growing in L.A. | A Container of Model F LED Grow Light is Ready for Shipment | Light On Technology Wishes all of youamerry christmas and happy new year. | Updated Three Types LED Grow Lights | Light On Technology is Attending the Asia-Pacific Industrial Hemp Industry Expo | နည်းပညာတွင်အလင်းသည်အလင်း S ကိုကြီးထွားစေသည်
How to Choose and Design LED Plant Lighting Plant Growth Lights? | Cannabis ကြီးထွားရန် LEDs များသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုလား။ | ငါ Cannabis ကို LEDs တွေနဲ့ဘယ်လိုကြီးထွားခဲ့တာလဲ။ | The Difference Between Cannabis, Hemp and Marijuana Explained | ဖန်လုံအိမ်အပင်ထပ်ဆောင်းအလင်းရောင်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံရှိပါသလား။ ၀ ယ်တဲ့အခါထောင်ချောက်တွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။ | CBN vs. CBD: What's the Real Difference? | LEDs နှင့်အတူကြီးထွားလာဘို့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် | What is The Right Number of Plants For My Grow Setup?